#10 quán ăn ngon ở Gia Lai nhất định phải thử một lần trong đời | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
#10 quán ăn ngon ở Gia Lai nhất định phải thử một lần trong đời | Excitinghochiminhcity
Iyo Central Highlands ine nzvimbo dzakawanda dzakanaka dzine mukurumbira munyika yevashanyi, kunze kweiyo quintessential highland cuisine zvakare inoita fungidziro yakasimba kune vazhinji vashanyi. Kana uine mukana wekuuya panyika ino, ndokumbirawo umire na10 chikafu chinonaka muGia Lai – imwe yemabiko makuru eCentral Highlands!
1 Brown Tile Restaurant – inonaka yekudyira muGia Lai
2 Pleiku’s 3 regions rice-pot restaurant
3 KuNung Restaurant – Bien Ho
4 Com Que Restaurant
5 Beach Street Restaurant
6 Inonaka yekudyira muGia Lai Grilled huku IA GUI
7 Tay Nguyen Grilling Village
8 Imba Yangu – iresitorendi inonaka muGia Lai
9 Green Pleiku Restaurant
10 Kicochi House – Gia Lai Korean barbecue kero
Brown Tile Restaurant – inonaka yekudyira muGia Lai
Tile Nau iresitorendi yenguva refu muGia Lai, ine motto “isismokeless grill restaurant”, marasha anoshandiswa muresitorendi ane hunyanzvi hwemarasha, haagadzire utsi, anogadzira kunhuhwirira, haakanganisa hutano.
Iyi resitorendi inonaka muGia Lai inoonekwa seimwe yemaresitorendi akagadzirwa zvinoyevedza. Nzvimbo iri mukati meresitorendi ine umbozha ma toni maviri makuru emuti webrown neblack, zvinhu zvinonyanya kushandiswa apa ndezvomutiwo, zvinoita kuti zvitaridzike zvinoyevedza, asi kana wakagara pasi, unonzwa kudziya.kunamata uye kujairira.
Mufananidzo: Brown Tile Restaurant
Menyu paTile Brown yakanyatsosiyana, uye kunyanya vatengi vanowanzoodha mumaseti, mamwe anowanzo kunzi seti paTile Brown ndeaya anotevera:
Muzhizha: sashimi + Weasel-style yakabikwa veal + mallard (dhadha dumbu rakabikwa nechibage uye rakabikwa nemuto wehove) + eel yakanyikwa mu perilla (6 vanhu kuti vadye)
Chengetedza moto werudo: muto wegakanje + yakagochwa isina bhonzo yenyama yemombe yekuAmerica + dumbu renguruve yakakangwa nemuto wehove + yakakangwa suede shrimp nemafuta + hove dzine nhungirwa dzakavava dze bamboo dzakabikwa (vanhu 6)
Hanzvadzi nehanzvadzi: Tile Brown shrimp hotpot + yakagochwa lentiro ine galangal + oyster ine apple soso (5 vanhu)
Pwere inotapira: hove paste yakasanganiswa ne shrimp + hozhwa nemunyu, mafuta + gakanje rakabikwa nemupunga unonamira + mallard akagadzirwa ndiro mbiri (6 vanhu)
Pleiku’s 3 regions rice-pot restaurant
Imba mitatu yakapfava yepoto yemupunga ine mukurumbira muGia Lai, iyo resitorendi ine nzvimbo inotonhorera nekushandisa zvizere ruvara rwegoridhe kubva mumacage temples, pamwe neruvara rwuripo ibrown yakasviba yakatenderedza resitorendi. Vabiki veRice munzvimbo nhatu dzePleiku. tarisa seimba yekare yaumbozha yevanhu vakapfuma kare.
Muresitorendi siginicha yepoto ine mweya wemupunga inosanganisa: poto yemupunga chena inonhuhwirira ine mupunga wemugomo, mbiya yenguruve yakarukwa yakakangwa, nyama yenguruve yakarukwa inotapira uye inonaka inonaka, inoperekedzwa nendiro ye eggplant. pickles, mbiya ye minced pork kabichi soup uye pakupedzisira ndiro yenyama yemombe yakakangwa neThien Ly cotton.
Mufananidzo: Ngon 3 Mien
Uye zvakare, iyo yekudyira ine zvimwe zvinonaka zvakaenzana zvaunogona kusarudza kubva se: yakagochwa nyama yenguruve mabhanzi, yakagochwa lenti, nyama yemombe yakakangwa ine chili, huku yakakangwa neyakajairwa Lam mupunga weCentral Highlands, crab hotpot, inoyamwa nguruve barbecue, …
KuNung Restaurant – Bien Ho
Kero: 220 Ton Duc Thang, Bien Ho, Pleiku City, Gia Lai Province
Nhamba yenhare: 090 651 90 99
Maawa ebhizinesi: 7.00AM – 22.00PM
Mitengo yemitengo: 50,000 – 250,000 VND / ndiro
Kana iwe ukataura kuti ndeipi resitorendi muGia Lai ine yakanyanya Central Highlands flavour, mhinduro ndeyeKuNung Bien Ho Restaurant. Iyo yekudyira ine yakasarudzika dhizaini inosanganisira stilts akaparadzana anoumba makamuri ekudyira akasiyana. KuNung restaurant “veals” maitiro echinyakare stilt house yeCentral Highlands vanhu kuvaka imba yekudyira ine zvese zvechinyakare uye zvemazuva ano.
Pamusoro penzvimbo yemukati pane stilts, nzvimbo yekunze mubindu, yakafukidzwa neinopenya mwenje wefirefly usiku, inofanirwawo kusarudza.
Mufananidzo: KuNung Bien Ho Restaurant
Zvokudya zvaunofanira kuedza kana uchishanyira iyi inonaka yekudyira muGia Lai ndeiyi: yakagochwa yenguruve yemarudzi ine crispy ganda, saladhi inoshandiswa nemashizha emusango uye chirongo cherudo chewaini. Ichi ndicho chikafu chakajairwa chaunowanzo kuona mumapati ehusiku ese emisha yeCentral Highlands misha uye yakachengetedzwa kusvika zvino.
Chimwe chinonakidza ndechekuti vashandi vepachitoro ichi vakapfekawo zvipfeko zvechinyakare zvevanhu vekuCentral Highlands, izvo zvinokwezva maziso.
Com Que Restaurant
Kero: 31 Le Lai, Tay Son wadhi, Pleiku guta, Gia Lai mudunhu
Nhamba yenhare: 090 506 08 81
Maawa ebhizinesi: 10.00AM – 22.00PM
Mitengo yemitengo: 70,000 – 190,000 VND / ndiro
Com Que restaurant yakasarudzwa nevakawanda vanodya ichadzoka kechipiri pakati pemaresitorendi anonaka muGia Lai, zvakakwana kuti uone kukwezva kubva kune cuisine uye kuti yakakura sei nzvimbo yeresitorendi iyi.
Kusiyana neNung restaurant, inova imba yekudyira ine zvachose nuances yeCentral Highlands, Com Que – sezita rayo, iresitorendi ine mweya wekumaruwa.
Nzvimbo yeresitorendi inonyanya kuve yakashongedzwa nemwenje yero toni, zvese matafura nemacheya uye pasi. Mataira emadziro anoshandiswa akanakisa matombo, zvinhu zvekushongedza muchitoro zvinonyanya kusvibira muhari zvirimwa zvekugadzira mhepo yakasununguka yeresitorendi.
Mufananidzo: Gia Lai Rice Restaurant
Seresitorendi inoshanda nekupa chikafu cherustic, iyo huru menyu yauchawana mutireyi yemupunga pano ndeiyi: mbiya yemupunga, mbiya hombe yemuto (soup inovava kana bok choy soup yakabikwa nenyama yakagayiwa), ndiro imwe. fry (mavise anovava, Thien li, tofu,…), dhishi yakabikwa, ndiro yemuriwo mbishi uye makapu emuto unonaka unodiwa.
Beach Street Restaurant
Kero: 05 Dong Tien, Dien Hong Ward, Pleiku Guta, Gia Lai Province
Nhamba yenhare: 0269 3875 666
Maawa ebhizinesi: 9.00AM – 24.00PM
Mitengo yemitengo: 50,000 – 400,000 / ndiro
Kunyangwe iri nzvimbo ine makomo, chikafu chemugungwa chinofarirwawo zvakanyanya kana vashanyi vakashanyira Gia Lai. Pho Bien resitorendi ine zita rakajeka yakaratidza basa rayo mukupa zviwanikwa zvegungwa kune vanhu veko pamwe nekushandira vashanyi seyechokwadi sologan yeresitorendi “inounza gungwa kuguta regomo”.
Mufananidzo: Seaside Street Restaurant
Pho Bien ine 2 pasi pesevhisi, yakapamhama uye yakapamhama nzvimbo, yakagadzirwa neiyo huru chena toni kuunza nyore uye kunyaradza kune vanodya. Yakanyatsokodzera mapoka makuru eshamwari uye mhuri.
Unogona kuwana zvikafu zvisingaverengeki muresitorendi: kubva kuma shrimps, crabs, crabs, hozhwa, mussels, oyster, clams, eel, hove, … zvinoshandurwa kuita marudzi ese emidziyo senge poto inopisa, yakagochwa, yakabikwa, nezvimwe. … Yakakangwa mwana lobster ine lemongrass, yakagochwa yekuKorea abalone ine chizi, Huynh De gakanje, hofori yemvura yakachena prawn ine muto weThai muto, makaka akagochwa ane chizi ndiro dzinofarirwa zvikuru dzaunofanira kuedza.
Inonaka yekudyira muGia Lai Grilled huku IA GUI
Kero: 27 Pham Ngoc Thach, Dong Da, Pleiku City, Gia Lai Province
Nhamba yenhare: 0269 3825 225
Maawa ebhizinesi: 7.00AM – 21.00PM
Mitengo yemitengo: 50,000 – 100,000 VND / ndiro
Huku yakagochwa ine mupunga inoonekwa seyakakosha vanhu veCentral Highlands, saka hazvishamise kuti kune akawanda maresitorendi ane hunyanzvi hwekupa chikafu ichi, saka kune akawanda uye akawanda maresitorendi akadai seKsor Hnao artisan shop, Plei Teeng restaurant. , Bazan restaurant,… asi Zita rekuti IA GUI ndiro rinonyanya kuzivikanwa, asi vanhu vekumaruwa vanowanzoriverenga se “grilled chicken la guoi”.
Huku inoshandiswa pakubika haina kukura sehuku yedu, asi idiki, yakasimudzwa nemafuro emahara, saka nyama inopfava, ine muto uye inonhuhwirira. Mupunga unoshanduka uye unonhuhwirira nekunhuhwirira kwe bamboo, yakanyikwa nezvinonhuwira. Ichiperekedzwa nendiro yenyama yakagochwa nemiriwo yemusango, tireyi yemupunga inonaka mumakomo inopedzwa.
Mufananidzo: Anh Khoa
Nzvimbo yeresitorendi yakagadzirwa nenzira yeimba yega yega yeshizha muimba yekudyira, pasi peimba pane gomba duku, nzvimbo inofadza yekunze kunze inoitawo kuti vanodya vadye zviri nani. Mushure mekudya, unogona kushanyira bindu remuriwo rakakura rakasimwa nemuridzi pachake kuti ashumire vanodya.
Tay Nguyen Grilling Village
Kero: 196 Le Thanh Ton Street, Dien Hong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Nhamba yenhare: 0968 438 379
Maawa ebhizinesi: 10,000AM – 21.00PM
Mitengo yemitengo: 199,000 / buffet tikiti
Pamusoro pekushanda seresitorendi yenguva dzose pakati pevhiki, neMugovera manheru, musha weCentral Highlands barbecue uchange uine buffet ine zvinopfuura makumi mana akasiyana emugomo ndiro. Mamwe madhishi anogona kutaurwa mutikiti rebuffet aya ndeaya: nyama yemombe yakagochwa, Central Highlands dombo yakagochwa nyama yemombe, Red fire Central Highlands nyama yemombe, mink yenguruve yakagochwa, nguruve yemusango yakagochwa mumusha weDon, nezvimwe.
Mufananidzo: Tay Nguyen Barbecue Village
Iwe unogona kusarudza kunakidzwa nechikafu muresitorendi kana kubatana nemhepo inonakidza muchivanze. Kazhinji, pachava nechirongwa chemoto wemusasa, kutamba uchitenderedza kutamba kwechinyakare, kunwa waini ine nyaya mbiri uye kunakidzwa nekurira kwegongo rinorira mumakomo asingagumi nemasango.
Shanyira iyo Central Highlands barbecue musha kuti uwane chikafu chikuru uye unyudze iwe pachako mumapato emweya akasarudzika evanhu ve “Don musha”.
Imba Yangu – iresitorendi inonaka muGia Lai
Kero: 439 Ngo Quyen Street, Tra Da, Pleiku City, Gia Lai Province
Nhamba yenhare: 0269 3758 279
Mitengo yemitengo: 100,000 – 250,000 VND / ndiro
Imwe nzvimbo yekudyira inonaka muGia Lai ndeye Quan Nha Toi, yakasiyana neiyo iri munzvimbo ine vanhu vakawanda uye yakabatikana pakati peguta rePleiKu, Imba Yangu iri munzvimbo dzine runyararo, izere nekunhuwirira kwemhepo yemakomo.
Kuunza kutaridzika kweimba diki yemapuranga mumaruwa ane runyararo, chitoro chine matanda, zvidhinha zvakasvibira sezvinonyanya kurongwa, asi chimwe chinhu ndechekuti inounza manzwiro emunyika akachena, Imba yehuswa inoshamisa. ane ushamwari uye akasununguka. Uchienda kure kure, uchatora minda mikuru yemupunga, yakafukidzwa nemakomo.
Cuisine paImba Yangu musanganiswa wetsika dzechivanhu dzemadzinza eVietnam, Laos neThailand. Zvimwe zvidyo zvaunofanira kuedza kana uchiuya pano ndezvi: mapanikake ekusvetuka, mupunga weLao, poto yakagochwa, poto yeThai, waini yemakwenzi ine zvinwiwa, ndiro dzehove dzakabatwa kumusoro kweRwizi rweMekong, … zvichagutsa mukanwa mako.
Green Pleiku Restaurant
Kero: Boka 12 Bui Du, Hoa Lu Ward, Pleiku Guta, Gia Lai Province
Nhamba yenhare: 0397 368 627
Maawa ebhizinesi: 9.00AM – 22.00PM
Mitengo yemitengo: 50,000 – 200,000 VND / ndiro
PleiKu Xanh iresitorendi yechinyakare yegadheni muGia Lai, nzvimbo yekudyira yakafukidzwa nemitsara yemiti yakasvibira uye ruvara rwedhamu zvakare rwakanaka rweturquoise, senge izwi rekuti “Green” muzita reresitorendi.
Iyo gadheni nedhizaini dhizaini yakasanganiswa neyakasarudzika imba yakazadzwa nechinhu cheCentral Highlands, nzvimbo yese yekudyira inoita kunge pendi yakasviba yemvura. Hutsanana pano hunochengetedzwa zvakanyanya, nzvimbo inoyevedza uye nemhepo inotonhorera yemugomo inobatsira vanodya kuti vanzwe vakacheneswa mumuviri nepfungwa.
Kushanyira Green PleiKu, unogona kuyedza zvimwe zvinodyiwa sezvinotevera: huku yakakangwa nemupunga weyero wakarukwa nemunyu, ndiro dzehove dzekumba dzakaita sehove yakagochwa yenyoka ine musoro, hove yakakangwa negourg, yakakangwa, ndiro. , kugochwa kana kugochwa nemarasha….
Kicochi House – Gia Lai Korean barbecue kero
Kero: 78 Quyet Tien, Dien Hong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Nhamba yenhare: 098 264 42 39
Maawa ebhizinesi: 8.00AM – 22.00PM
Mitengo yemitengo: 249,000 VND/ yevanhu vaviri kusanganisira chikafu nezvinwiwa
Nzvimbo yekupedzisira pane iyi rondedzero haisi resitorendi kana resitorendi inoshanda nechikafu chemuno, asi yekuKorea barbecue restaurant.
Kune vashanyi vazhinji vanoda kudya zvemuno hunyanzvi pavanenge vachifamba uye vanoda kudya ndiro dzavanoziva nehupenyu hwavo. Kicochi yakaonekwa mumakore achangopfuura muGia Lai, kugadzirisa dambudziko iri revashanyi pamwe nekushandira vanhu veko.
Mufananidzo: Kicochi House
Kicochi House ine nzvimbo dzakawanda dzakasiyana ne: Tatami nzvimbo yakagara pamakusheni akanaka anobviswa; nzvimbo yepamusoro yetafura ine zvigaro zvakabatanidzwa nemakusheni akapfava anounza pfungwa yekuzorora; Nzvimbo yakaparadzana yetafura ine backrests inokodzera kuchinjana uye misangano neshamwari kuti iwe usarudze kubva.
Zvinogona kutaurwa kuti Kicochi House pabazi reGia Lai ibazi rakabudirira, nekuti kudya barbecue mumhepo nyowani yegomo kwakanaka chaizvo. Shanyira Kicochi, uchanakidzwa nemhando dzakasiyana-siyana dzenguruve uye nyama yemombe inotorwa kubva kuUS senge nyama yenguruve, nyama yemombe yekuAmerica, nyama yemombe, mbabvu yemombe, bhaketi remombe, mbabvu yenguruve… uye marudzi ese echikafu ane: kimchi, seweed. , bhinzi,…
Iyo Central Highlands ine sango uye rustic runako uye akasiyana uye akapfuma ndiro netsika zvinogara zvichikwezva kuda kuziva kwevashanyi vanobva kumativi ese enyika. Tinovimba kuburikidza nechinyorwa chiri pamusoro, iwe uchave uine yako pachako chikafu chinonaka muGia Lai kushanya parwendo rwako runotevera!
Mufananidzo wepikicha ndeyekodzero yeKicochi House
READ Quán Hải Sản Ngon TPHCM: 9 địa chỉ đông khách nhất | Excitinghochiminhcity
← Bật mí cách làm gà hấp xì dầu ngon, nhìn thôi đã thèm | Excitinghochiminhcity
Còn lại gì sau 2 năm? | Excitinghochiminhcity →